12 यूरोपमा सब भन्दा सुन्दर पहाडहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 12 यूरोपमा सब भन्दा सुन्दर पहाडहरू
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, रेल यात्रा चेक गणतन्त्र, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा लक्जमबर्ग, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
सबैको मनपर्ने चलचित्र यूरोपबाट “पहाडहरू स of्गीतको आवाजले जीवित छन्”. वास्तवमा निम्न 12 पहाडहरूले तपाईंलाई गाउनेछ र तपाईंको हृदय नृत्य. प्रख्यात आल्प्स र पाइरेनिस बाट लुकेका रत्न चेक गणराज्य को, हामीलाई एक हाइकमा सामेल हुनुहोस् 12 युरोपमा सब भन्दा सुन्दर पहाडहरू.
1. स्विट्जरल्याण्डमा मेटरहर्न माउन्टेन
Gornergat बाट Rothorn पहाड चुचुराहरू सम्म, Matterhorn Zermatt मा कहीं बाट पनि प्रशंसा गर्न सकिन्छ. Matterhorn हिउँ टोपी र यसको त्रिकोणीय रूप, अविश्वसनीय सुरम्य हिमाली दृश्यहरू सिर्जना गर्नुहोस्.
वसन्त वा जाडोमा, प्रसिद्ध Matterhorn हिमालहरु मा एक अद्भुत छुट्टी गन्तव्य हो. तपाईं स्विस आल्प्समा Matterhorn फेला पार्न सक्नुहुन्छ र बीचमा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ माथि चढाई 4,478 मीटर, जर्माटबाट होर्नली हटबाट सबैभन्दा लोकप्रिय मार्गमा पैदल यात्रा गर्न.
मैटरहोर्न वृद्धि यूरोप मा सब भन्दा सुन्दर रकम हो, हरियो स्विस घाँसको मैदानमा गहिरो. त्यसैले, तपाईंसँग प्रकृतिको सुन्दरतालाई प्रशंसा गर्दा तपाईंको सास फेर्न र तपाईंको सास फेर्न प्रशस्त ठाउँहरू छन्.
बेसल एक ट्रेन संग इंटरलाकिन गर्न
जिनेभा एक ट्रेन संग Zermatt गर्न
बर्न एक ट्रेन संग Zermatt
Lucerne एक ट्रेन संग Zermatt गर्न
2. Jauffu Lauterbrunnen घाटीमा, स्विट्जरल्याण्ड
सुन्दर Lauterbrunnen घाटी र मा को भूमि 72 झरनाहरु, तपाईं शानदार Jungfrau पहाड़ श्रृंखला पाउनुहुनेछ. मा 4,158 मीटर, जंगफ्राउ बर्नीस आल्प्सको अग्लो पहाड हो.
फेरि, तपाईं माटोमा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ वा युरोपको उच्च पहाडी ट्रेनबाट शानदार जंगफ्राउ हिमाली दृश्यहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ. एक तर्फ Mittelland Vosges सम्म, र अर्को पट्टि एलेट्स ग्लेशियर, बिल्कुल सास फेर्ने.
3. पूर्वी Tyrol मा Grossglockner, अस्ट्रिया
उच्चतम ग्रोसग्लॉक्नर पर्वतले घेरेको छ 266 अस्ट्रिया को छत भनिन्छ मा सानो चुचुराहरु. यो हिमाली श्रृंखलाले यूरोपमा एउटा अत्यन्तै पहाड दृश्य सिर्जना गर्दछ. ग्रोसग्लकनर यसमा अग्लो छ 3,798 मीटर, र Grossvenediger मा 3,666 मीटर, अस्ट्रियामा सब भन्दा सुरम्य पहाड दृश्य मध्ये एक सिर्जना गर्दै.
तपाईंले यी पाउनुहुनेछ2Hohe Tauren मा राक्षसहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज. यहाँ तपाईं माउन्टेन बाइकि .् जान सक्नुहुन्छ, पैदल यात्रा वा रक क्लाइम्बि।. यस तरिकाले तपाईं कुनै पनि कोणबाट सुरम्य दृश्यहरूको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ.
भियना ल्याण्डेक इस्चगलको साथ एउटा ट्रेन
म्यूनिखबाट ल्यान्डेक इस्चगल एक ट्रेनको साथ
साल्जबर्ग एक ट्रेन संग ल्यान्डेक इस्च्ल
एउटा ट्रेनको साथ ज्यूरिखदेखि ल्यान्डेक इस्च्ल
4. यूरोपमा सब भन्दा सुन्दर पहाडहरू: उच्च Dachstein मा अस्ट्रिया
अस्ट्रियामा दोस्रो उच्च पर्वत होर डाक्स्टिन हो, आकर्षक Halstatt शहर मा स्थित छ. होहेर डचस्टीनले जाडो र गर्मीमा सब भन्दा सुरम्य पहाड र ताल दृश्य प्रस्तुत गर्दछ. गर्मी याममा, तपाईं हरियो र फूलेको कार्ट पहाड प्रशंसा हुनेछ. जाडोमा, हिमालको चुचुरोबाट स्कीइ go जानुहोस्.
तथापि, हलस्ट्याटमा सब भन्दा सुन्दर पहाड दृश्यहरू हुनुपर्दछ5ताल हलस्ट्याटको फिंगर पोइन्ट. यदि तपाइँ अप्रिल देखि सेप्टेम्बर भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ, तातो जाडो तहहरु लगाउनुहोस्, किनकि यो अझै हिउँ परिरहेको छ र वर्षको यस समयमा ठंड हो. तपाईं केबल कारद्वारा यस अद्भुत दृष्टिकोणमा पुग्न सक्नुहुनेछ जब सम्म तपाईं बढि इनामदायी र रमाईलो अनुभवको लागि सम्पूर्ण मार्गमा पैदल यात्रा गर्न रुचाउँनुहुन्न.
म्यूनिख एक रेल संग हलोस्ट्याट
इन्सब्रक एक रेलको साथ हलस्ट्याटमा
Passau एक ट्रेन संग हॉलस्ट्याट गर्न
रोजेनहिम एउटा रेलको साथ हलस्ट्याट
5. चमोनिक्स-मोन्ट-ब्लान्क, फ्रान्स
चमोनिक्स आल्प्सको उच्च पहाड हो. बस 15 सिमाना बाट मिनेट, चमोनिक्स एक जाडो विन्डल्याण्ड हो. यहाँ, तपाईं मोन्ट ब्ल्याक को सुरम्य दृश्यहरु मा उडाउनु हुनेछ.
तपाईं मोन्ट ब्लान्क ट्रेन गर्न सक्नुहुन्छ, वा Chamonix शहर मा क्याफे र रेस्टुरेन्टबाट सुरम्य दृश्यहरु प्रशंसा. साथै, तपाईं Aiguille du Midi वा Mer du Glays गर्न सक्नुहुन्छ. कि त गतिविधि छान्नुहोस्, फ्रान्सको सब भन्दा रमणीय पहाडहरूको लुकाउने पहाड दृश्यहरू तपाईंलाई जताततै साथ दिनेछ.
6. यूरोपमा सब भन्दा सुन्दर पहाडहरू: पाइरेनीज
शानदार पाइरेनीसले सबैभन्दा सुन्दर पहाडी दृश्यहरू प्रदान गर्दछ. फ्रान्स मा सात हिमाल पर्वतमाला, Vosges, जुरा, मसिफ केन्द्रीय, आर्मोरिकन मसिफ, र कोर्सिकन मसिफ.
यो हिमाल पर्वतमाला यति विशाल छ कि तपाईंले अटलांटिक महासागरबाट भूमध्यसागरमा यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ. न केवल तपाईं आकर्षक पुरानो शहरहरूमा भ्रमण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, तर तपाईंसँग अर्को प्राकृतिक आश्चर्यको प्रशंसा गर्ने अनमोल मौका पनि हुनेछ. यो अचम्मको कुरा निश्चित रूपमा ग्रान्डे क्यास्केड डे गवार्नी वा गवर्नी झरना हो. एक ड्रप संग 422 मीटर, यो युरोपमा दोस्रो उच्चतम झरना हो.
त्यसैले, तपाईंको तस्वीरहरू बिल्कुल नेशनल ज्योग्राफिक उत्तम हुनेछ.
7. यूरोपमा सब भन्दा सुन्दर पहाडहरू: फ्रान्स मा भोल थोरन्स
मा माथि माथि 2300 फ्रेन्च आल्प्स मा मीटर, भेल थोरन्स हिउँ पर्वहरू हिउँदको समयमा सबै भन्दा राम्रा पहाडहरू हुन्. स्लाप स्लाइड गर्नुहोस्, आगोले तातो कोकोको कप राखेर, वा केबल कारबाट हेराईहरूको आनन्द लिईरहेको छ, दृश्यहरु धेरै उत्साहजनक छन्.
तथापि, अधिकतर स्कीको लागि Val Thorens को यात्रा, यो कुनै पनि अन्य मौसममा एकदमै दम छ. टेरेन्टाइज उपत्यका आकर्षक कुटीर घरहरूले भरिएको छ, घासको मैदान, र Isere नदी, पृष्ठभूमिमा भोल थोरन्स पर्वतहरूको साथ, सबै वर्ष भर प्रशंसा गर्न सुरम्य दृश्यहरू सिर्जना गर्नुहोस्.
8. इटालीमा डोलोमाइट्स
जब तपाइँबाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ7हेर्ने पोइन्टहरू, ठाउँ साँच्चै परिदृश्य मा दर्शनीय छ. दक्षिणी इटालीमा डोलोमाइट्स पहाडहरू, युरोपमा सबैभन्दा सुन्दर प्राकृतिक भण्डार मध्ये एक हो. यसबाहेक, यो संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय पैदल यात्रा स्थलहरु मध्ये एक हो.
तपाईं बोलजानोबाट एक दिनमा यात्रामा डोलोमाइट्सको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ, वा वृत्तमा २० किलोमिटरको यात्रामा. गतिविधिहरु, पिकनिक र तस्वीर स्पट, र पैदल यात्रा ट्रेल्स, अनन्त छन्. यो सबै शीर्षमा, विचारहरु एकदमै उत्साहजनक छन्, तपाइँको यात्रा मा कुनै पनि बिंदु मा.
सबै कारणहरूको लागि माथि सूचीबद्ध, डोलोमाइट्स इटालेली पहाडहरूमा छुट्टीको लागि आदर्श गन्तव्य हो.
9. यूरोपमा सब भन्दा सुन्दर पहाडहरू: वेल्स मा माउन्ट स्नोडन
माउन्ट स्नोडन यति सुन्दर छ कि यो अचम्म लाग्दैन कि यसको आफ्नै वाक अनुप्रयोग छ. स्नोडन वेल्समा अवस्थित छ, र पछि 6-8 घण्टाको वृद्धि, तपाईं स्नोडोनियाको आश्चर्यजनक दृश्यहरूको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ, Anglesey, Pembrokeshire, र आयरल्यान्ड.
साथै, को उचाई बाट 1085 मीटर, तपाईं पनि सक्षम हुनुहुनेछ सबै सुन्दर तालहरू हेर्नुहोस्. उदाहरणका लागि, सेवेलिन ताल र म्यानीड् माउरले सेवेलिन तालको अन्तमा दर्शनीय दृश्य प्रस्तुत गर्दछ।.
10. चेक गणराज्यमा Adrspach-Teplice
चेक गणराज्य अधिकतर सुन्दर प्रागका लागि परिचित छ. थोरैलाई अद्भुत बोहेमिया र रक गाउँको बारेमा थाहा छ, Adrspach-Teplice. Adrspach पोलिश सीमा नजिकै अवस्थित छ र पूर्ण रूपमा मा एक ठाउँ योग्य छ युरोपको आश्चर्यजनक प्राकृतिक चमत्कारहरू.
Adrspach-Teplice रक संरचनाहरूको बीचमा निर्मित गाउँ हो, ठाडो उचाइ, चक्रव्यूह संग, सुन्तला धारा, र ट्रेल्स. यो मनमोहक ठाउँ मात्र फेला पारिएको थियो 1824. त्यसबेलादेखि यात्रुहरूका लागि विशेष गन्तव्य भएको छ जुन असाधारण खोज्दछ.
यहाँ, तपाईं लुप ट्रेल हिंड्न सक्नुहुन्छ, गोथिक गेट र गोप्य खण्डहरू हुँदै. भित्रबाट अचम्मको चट्टान संरचनाहरूको प्रशंसा र निलो तालमा पुग्ने जस्तो केही छैन. तपाईं यी विशाल चट्टानको मुटुमा हिड्दै हुनुहुन्छ, गर्मीमा भ्रमण गर्नु उत्तम हुन्छ, जब दिनहरू लामो हुन्छन् र त्यहाँ धेरै प्रकाश हुन्छ.
11. लक्जमबर्गमा मुलरथल क्षेत्र
केहि संग युरोपमा सबै भन्दा सुन्दर दृष्टिकोण, लक्जमबर्गमा मुललरथल पहाडहरूले रमणीय पथहरू र लुकेका रहस्यमय ठाउँहरू प्रस्ताव गर्छन्. ज you्गलमा हिंड्दा, ताल र स्प्रि pastहरू बितेको, हरियो चट्टानी पहाडहरू, तपाइँले बच्चाको कथामा पाइला फेला पार्नुहुनेछ.
मुलरथल क्षेत्रमा युरोपमा केहि सब भन्दा विशेष परिदृश्य र दृश्यहरू छन्. महल, गुफाहरू, पुल, र झरनाहरू, तपाईं जहाँ हेर्नुहुन्छ त्यहाँ राम्रा दृश्यहरू छन्. यसरी, पैदल यात्रा वा साइकल, कम्तिमा केहि दिन बनाउन निश्चित हुनुहोस्, मुलरथलको सुरम्य पहाड दृश्यहरूको प्रशंसा गर्न.
लक्जमबर्ग एक ट्रेन संग कोलमार
एन्ट्वर्प एक ट्रेन संग लक्जमबर्ग गर्न
ट्रेनबाट मेट्जम्बर्गमा लक्जमबर्ग
12. यूरोपमा सब भन्दा सुन्दर पहाडहरू: Stanserhorn, स्विट्जरल्याण्ड
हिउँ चुचुरो, उज्यालो हरियो पहाडहरू, र उपत्यकामा आकर्षक साना देश घरहरू, स्टानसेर्नबाट आएका विचारहरू सबैभन्दा मनमोहक हो. शानदार Stanserhorn पहाड मात्र छ 20 ट्रेनबाट लुसर्नबाट मिनेट टाढा र भित्रपट्टि एक शानदार दिन यात्रा गर्दछ भव्य स्विजरल्याण्ड.
यहाँ तपाईं केबल कार स्विस आल्प्स र तालहरूको अद्भुत दृश्यहरूका लागि पहाडको शीर्षमा लिन सक्नुहुनेछ।. Stanserhorn को मनमोहक पहाड दृश्यहरु लाई प्रशंसा गर्ने अर्को उत्तम तरिका हो पिकनिक स्पट. यस तरीकाले तपाईं दिनको आराम र सौन्दर्य र आल्प्समा सास फेर्दै हुनुहुन्छ’ स्वच्छ हावा.
एउटा ट्रेनको साथ ज्यूरिखदेखि लुसारिन
बर्न एक ट्रेन संग Lucerne
जिनेभा एक ट्रेन संग Lucerne गर्न
एक ट्रेनको साथ कोन्स्टान्जबाट लुसेर्न
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाइँलाई तपाइँको छुट्टीको योजना बनाउन सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं 12 रेलमार्गबाट ​​युरोपमा प्रायः सुरम्य पहाडहरू.
के तपाईं हाम्रो ब्लग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ “१२ युरोपमा सब भन्दा मनमोहक पहाडहरू” तपाईंको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Fmost-picturesque-mountains-europe%2Fاور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
Bestnaturereservesineurope हिमशृंखला पहाड माउन्टेनभ्युज चित्रकारी पिक्चरममेन्ट्स दृश्य दृश्य